? => H2O2 (ဟိုက်ဒရိုဂျင်ပါအောက်ဆိုဒ်) | Chemical Equation Balancer
? = H2O2 | ဓာတုညီမျှခြင်း Balancer
? = ဟိုက်ဒရိုဂျင်ပါအောက်ဆိုဒ်
28 ရလဒ်များ တွေ့ရှိရ
ကနေညီမျှခြင်းပြသခြင်း 1 သို့5စာမျက်နှာ ၁ - နောက်ထပ်ရလဒ်များကိုကြည့်ရှုရန်အဆုံးသို့ scroll လုပ်ပါ
H2SO4 + ဘအို2 → H2O2 + BaSO4
ဆာလဖျူရစ်အက်ဆစ် ဘေရီယမ်ပါအောက်ဆိုဒ် ဟိုက်ဒရိုဂျင်ပါအောက်ဆိုဒ် ဘေရီယမ် sulfate
(လန်) (Run) (လန်) (kt)
(khôngmàu) (စကား) (khôngmàu) (စကား)
H ညီမျှခြင်းအကြောင်း နောက်ထပ်အချက်အလက်များ2SO4 + ဘအို2 →အိပ်ခ်ျဒီ2O2 + BaSO4
H2SO4 (ဆာလ်ဖျူရစ်အက်ဆစ်) သည် BaO2 (ဘေရီယမ်ပါအောက်ဆိုဒ်) နှင့် ဓာတ်ပြုသည့်အခြေအနေဟူသည် အဘယ်နည်း။
ရှင်းလင်းချက်- အပူချိန်၊ ဖိအား၊ ဓာတ်ကူပစ္စည်း၊ နှင့် ပျော်ရည်ကဲ့သို့သော တုံ့ပြန်မှုအတွက် စံပြပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေများ။ ဓာတ်ကူပစ္စည်းများသည် ဓာတုတုံ့ပြန်မှု၏အရှိန်အဟုန် (အလျင်) ကို စားသုံးခြင်း သို့မဟုတ် အဆုံးထုတ်ကုန်၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်ခြင်းမရှိဘဲ အရှိန်မြှင့်ပေးသည့် အရာများဖြစ်သည်။ ဓာတ်ကူပစ္စည်းများသည် မျှခြေအခြေအနေများအပေါ်တွင် သက်ရောက်မှုမရှိပါ။
H2O2 (ဟိုက်ဒရိုဂျင်ပါအောက်ဆိုဒ်) နှင့် BaSO4 (ဘေရီယမ်ဆာလဖိတ်) တို့ကို မည်သို့တုံ့ပြန်မှုများ ဖြစ်ပွားနိုင်သနည်း။
BaO2 H2SO4 နှင့်ဓာတ်ပြုပါသည်
H2SO4 (sulfuric acid) သည် BaO2 (barium peroxide) နှင့် ဓာတ်ပြုပြီးနောက် ဖြစ်စဉ်၊
တုံ့ပြန်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး သိထားသင့်တဲ့ တခြားအရေးကြီးအချက်အလက်တွေက ဘာတွေလဲ။
ဤဓာတုတုံ့ပြန်မှုများနှင့်ပတ်သက်ပြီး ကျွန်ုပ်တို့တွင် နောက်ထပ်အချက်အလက်များမရှိပါ။
ဓာတုတုံ့ပြန်မှု H2SO4 + ဘအို2 →အိပ်ခ်ျဒီ2O2 + BaSO4
ဓာတ်ပြုခြင်း H2SO4 (ဆာလ်ဖျူရစ်အက်ဆစ်) နှင့် သက်ဆိုင်သော မေးခွန်းများ
H2SO4 (ဆာလ်ဖျူရစ်အက်ဆစ်) ၏ ဓာတုနှင့် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ လက္ခဏာများကား အဘယ်နည်း။ H2SO4 (ဆာလ်ဖျူရစ်အက်ဆစ်) ဓာတ်ပြုနိုင်သော ဓာတုတုံ့ပြန်မှုကား အဘယ်နည်း။
ဓာတ်ပြုနိုင်သော BaO2 (ဘေရီယမ်ပါအောက်ဆိုဒ်) နှင့် သက်ဆိုင်သောမေးခွန်းများ
BaO2 (ဘေရီယမ်ပါအောက်ဆိုဒ်) ၏ ဓာတုနှင့် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ လက္ခဏာများကား အဘယ်နည်း။ BaO2 (ဘေရီယမ်ပါအောက်ဆိုဒ်) ဓာတ်ပြုနိုင်သော ဓာတ်ပြုမှုဆိုသည်မှာ အဘယ်နည်း။
ထုတ်ကုန် H2O2 (ဟိုက်ဒရိုဂျင်ပါအောက်ဆိုဒ်) နှင့်ပတ်သက်သောမေးခွန်းများ
H2O2 (ဘေရီယမ်ပါအောက်ဆိုဒ်) ၏ ဓာတုနှင့် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ လက္ခဏာများကား အဘယ်နည်း။ ထုတ်ကုန်အဖြစ် H2O2 (ဟိုက်ဒရိုဂျင်ပါအောက်ဆိုဒ်) ပါသော ဓာတုတုံ့ပြန်မှုကား အဘယ်နည်း။
ထုတ်ကုန် BaSO4 (barium sulfate) နှင့် ပတ်သက်သော မေးခွန်းများ
BaSO4 (barium peroxide) ၏ ဓာတုနှင့် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ လက္ခဏာများကား အဘယ်နည်း။ ထုတ်ကုန်အဖြစ် BaSO4 (ဘေရီယမ်ဆာလဖိတ်) ပါရှိသော ဓာတုတုံ့ပြန်မှုများကား အဘယ်နည်း။
ညီမျှခြင်းရလဒ် # 2
လီသီယမ်ပါအောက်ဆိုဒ်။ ဟိုက်ဒရိုဂျင်ပါအောက်ဆိုဒ်။ ရေ ရေ ဟိုက်ဒရိုဂျင်ပါအောက်ဆိုဒ် Peroxydilithium
131 1 Hệsố
Li ညီမျှခြင်းအကြောင်း နောက်ထပ်အချက်အလက်များ2O2.H2O2.3H2O → 3H2O + H2O2 + Li2O2
Li2O2.H2O2.3H2O (လီသီယမ်ပါအောက်ဆိုဒ်၊ ဟိုက်ဒရိုဂျင်ပါအောက်ဆိုဒ်။ ရေ) ၏ တုံ့ပြန်မှုအခြေအနေကား အဘယ်နည်း။
ဖိအား: လေဟာနယ် အခြားအခြေအနေ P4O10 ပေါ်မှာ
H2O (ရေ) နှင့် H2O2 (ဟိုက်ဒရိုဂျင်ပါအောက်ဆိုဒ်) နှင့် Li2O2 (Peroxydilithium) တို့ကို မည်သို့ တုံ့ပြန်မှုများ ဖြစ်ပွားနိုင်သနည်း။
Li2O2.H2O2.3H2O (လီသီယမ်ပါအောက်ဆိုဒ်၊ ဟိုက်ဒရိုဂျင်ပါအောက်ဆိုဒ်။ ရေ)
ဤညီမျှခြင်းသည်ဖြစ်ရပ်ဆန်းနှင့် ပတ်သက်၍ တိကျသောသတင်းအချက်အလက်မရှိပါ။
ဤကိစ္စတွင်, သင်ရုံထုတ်ကုန်ပစ္စည်းဥစ္စာရှိမရှိကြည့်ရှုရန်စောင့်ကြည့်ဖို့လိုအပ်ပါတယ် Li2O2 (Peroxydilithium), တုံ့ပြန်မှုရဲ့အဆုံးမှာပေါ်ထွန်း။
သို့မဟုတ်အောက်ပါဓာတ်ပြုပစ္စည်းတွေမဆိုလျှင် Li2O2.H2O2.3H2O (လီသီယမ်ပါအောက်ဆိုဒ်။ ဟိုက်ဒရိုဂျင်ပါအောက်ဆိုဒ်။ ရေ), ပျောက်ကွယ်သွားသည်
ဓာတုတုံ့ပြန်မှု Li နှင့်ပတ်သက်သော နောက်ထပ်မေးခွန်းများ2O2.H2O2.3H2O → 3H2O + H2O2 + Li2O2
Reactant Li2O2.H2O2.3H2O (Lithium peroxide. Hydrogen peroxide. water) နှင့် သက်ဆိုင်သော မေးခွန်းများ
Li2O2.H2O2.3H2O (လီသီယမ်ပါအောက်ဆိုဒ်။ ဟိုက်ဒရိုဂျင်ပါအောက်ဆိုဒ်။ ရေ) ၏ ဓာတုနှင့် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလက္ခဏာကား အဘယ်နည်း။ ဓာတ်ပြုသည့်အနေဖြင့် Li2O2.H2O2.3H2O (Lithium peroxide. Hydrogen peroxide. water) ပါရှိသော ဓာတုတုံ့ပြန်မှုများကား အဘယ်နည်း။
ထုတ်ကုန် H2O (ရေ) နှင့် ပတ်သက်သော မေးခွန်းများ
H2O (လီသီယမ်ပါအောက်ဆိုဒ်၊ ဟိုက်ဒရိုဂျင်ပါအောက်ဆိုဒ်။ ရေ) ၏ ဓာတုနှင့် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလက္ခဏာကား အဘယ်နည်း။ ထုတ်ကုန်အဖြစ် H2O (ရေ) ပါသော ဓာတုတုံ့ပြန်မှုကား အဘယ်နည်း။
H2O2 (လီသီယမ်ပါအောက်ဆိုဒ်၊ ဟိုက်ဒရိုဂျင်ပါအောက်ဆိုဒ်။ ရေ) ၏ ဓာတုနှင့် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ လက္ခဏာကား အဘယ်နည်း။ ထုတ်ကုန်အဖြစ် H2O2 (ဟိုက်ဒရိုဂျင်ပါအောက်ဆိုဒ်) ပါသော ဓာတုတုံ့ပြန်မှုကား အဘယ်နည်း။
ထုတ်ကုန် Li2O2 (Peroxydilithium) နှင့် ပတ်သက်သည့် မေးခွန်းများ
Li2O2 (လီသီယမ်ပါအောက်ဆိုဒ်၊ ဟိုက်ဒရိုဂျင်ပါအောက်ဆိုဒ်။ ရေ) ၏ ဓာတုနှင့် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလက္ခဏာကား အဘယ်နည်း။ ထုတ်ကုန်အဖြစ် Li2O2 (Peroxydilithium) ပါရှိသော ဓာတုတုံ့ပြန်မှုများကား အဘယ်နည်း။
ညီမျှခြင်းရလဒ် # 3
H2SO4 + Na2O2 → H2O2 + Na2SO4
ဆာလဖျူရစ်အက်ဆစ် ဆိုဒီယမ်ပါအောက်ဆိုဒ် ဟိုက်ဒရိုဂျင်ပါအောက်ဆိုဒ် ဆိုဒီယမ် sulfate
(လန်) (Run) (လန်) (rn)
H ညီမျှခြင်းအကြောင်း နောက်ထပ်အချက်အလက်များ2SO4 + Na2O2 →အိပ်ခ်ျဒီ2O2 + Na2SO4
H2SO4 (ဆာလ်ဖျူရစ်အက်ဆစ်) သည် Na2O2 (ဆိုဒီယမ်ပါအောက်ဆိုဒ်) နှင့် ဓာတ်ပြုသည့်အခြေအနေဟူသည် အဘယ်နည်း။
H2O2 (ဟိုက်ဒရိုဂျင်ပါအောက်ဆိုဒ်) နှင့် Na2SO4 (ဆိုဒီယမ်ဆာလဖိတ်) တို့ကို မည်သို့ တုံ့ပြန်မှုများ ဖြစ်ပွားနိုင်သနည်း။
H2SO4 သည် Na2O2 နှင့်ဓါတ်ပြုပါသည်
H2SO4 (ဆာလ်ဖျူရစ်အက်ဆစ်) သည် Na2O2 (ဆိုဒီယမ်ပါအောက်ဆိုဒ်) နှင့် ဓာတ်ပြုပြီးနောက် ဖြစ်စဉ်၊
ဤကိစ္စတွင်, သင်ရုံထုတ်ကုန်ပစ္စည်းဥစ္စာရှိမရှိကြည့်ရှုရန်စောင့်ကြည့်ဖို့လိုအပ်ပါတယ် Na2SO4 (ဆိုဒီယမ်ဆာလဖိတ်), တုံ့ပြန်မှုရဲ့အဆုံးမှာပေါ်ထွန်း။
သို့မဟုတ်အောက်ပါဓာတ်ပြုပစ္စည်းတွေမဆိုလျှင် Na2O2 (ဆိုဒီယမ်ပါအောက်ဆိုဒ်), ပျောက်ကွယ်သွားသည်
ဓာတုတုံ့ပြန်မှု H2SO4 + Na2O2 →အိပ်ခ်ျဒီ2O2 + Na2SO4
Reactant Na2O2 (ဆိုဒီယမ်ပါအောက်ဆိုဒ်) နှင့် သက်ဆိုင်သော မေးခွန်းများ
Na2O2 (ဆိုဒီယမ်ပါအောက်ဆိုဒ်) ၏ ဓာတုနှင့် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ လက္ခဏာများကား အဘယ်နည်း။ Na2O2 (ဆိုဒီယမ်ပါအောက်ဆိုဒ်) ဓာတ်ပြုနိုင်သော ဓာတုတုံ့ပြန်မှုကား အဘယ်နည်း။
H2O2 (ဆိုဒီယမ်ပါအောက်ဆိုဒ်) ၏ ဓာတုနှင့် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ လက္ခဏာများကား အဘယ်နည်း။ ထုတ်ကုန်အဖြစ် H2O2 (ဟိုက်ဒရိုဂျင်ပါအောက်ဆိုဒ်) ပါသော ဓာတုတုံ့ပြန်မှုကား အဘယ်နည်း။
ထုတ်ကုန် Na2SO4 (ဆိုဒီယမ်ဆာလဖိတ်) နှင့်ပတ်သက်သောမေးခွန်းများ
Na2SO4 (ဆိုဒီယမ်ပါအောက်ဆိုဒ်) ၏ ဓာတုနှင့် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ လက္ခဏာများကား အဘယ်နည်း။ Na2SO4 (ဆိုဒီယမ်ဆာလဖိတ်) ပါ၀င်သော ဓာတုတုံ့ပြန်မှုများကား အဘယ်နည်း။
ညီမျှခြင်းရလဒ် # 4
ရေ Ammonium persulfate ဟိုက်ဒရိုဂျင်ပါအောက်ဆိုဒ် ဆာလ်ဖာအက်ဆစ်ဟိုက်ဒရိုဂျင် ammonium ဆား; အမိုးနီးယားဆာလဖိတ်
(လန်) (rn) (လန်) (rn)
1055 10 Hệsố
ညီမျှခြင်း 10H ၏ နောက်ထပ်အချက်အလက်များ2O +5(NH4)2S2O8 → 5H2O2 + 10NH4HSO4
H2O (ရေ) သည် (NH4) 2S2O8 (ammonium persulfate) နှင့် ဓာတ်ပြုသည့်အခြေအနေဟူသည် အဘယ်နည်း။
H2O2 (ဟိုက်ဒရိုဂျင်ပါအောက်ဆိုဒ်) နှင့် NH4HSO4 (ဆာလ်ဖျူရစ်အက်ဆစ် ဟိုက်ဒရိုဂျင် အမိုနီယမ်ဆား၊ Ammonium sulfate) မည်ကဲ့သို့ တုံ့ပြန်မှုများ ဖြစ်ပွားနိုင်သနည်း။
(NH4) 2S2O8 သည်ရေငွေ့နှင့်ဓာတ်ပြုပါသည်
H2O (ရေ) သည် (NH4) 2S2O8 (ammonium persulfate) နှင့် ဓာတ်ပြုပြီးနောက် ဖြစ်စဉ်၊
ဤကိစ္စတွင်, သင်ရုံထုတ်ကုန်ပစ္စည်းဥစ္စာရှိမရှိကြည့်ရှုရန်စောင့်ကြည့်ဖို့လိုအပ်ပါတယ် NH4HSO4 (sulfuric acid ဟိုက်ဒရိုဂျင်အမ်မီနီယမ်ဆား; အမိုးနီးယမ် sulfate), တုံ့ပြန်မှုရဲ့အဆုံးမှာပေါ်ထွန်း။
သို့မဟုတ်အောက်ပါဓာတ်ပြုပစ္စည်းတွေမဆိုလျှင် (NH4) 2S2O8 (ammonium persulfate), ပျောက်ကွယ်သွားသည်
ဓာတုတုံ့ပြန်မှုများ 10H နှင့်ပတ်သက်သော နောက်ထပ်မေးခွန်းများ2O +5(NH4)2S2O8 → 5H2O2 + 10NH4HSO4
H2O (ရေ) ဓာတ်ပြုခြင်းဆိုင်ရာမေးခွန်းများ
H2O (ရေ) ၏ ဓာတုနှင့် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ လက္ခဏာများကား အဘယ်နည်း။ H2O (ရေ) ဓာတ်ပြုမှုအဖြစ် ဓာတုတုံ့ပြန်မှုများသည် အဘယ်နည်း။
ဓာတ်ပြုခြင်း (NH4)2S2O8 (အမိုနီယမ်ဆာလဖိတ်) နှင့် သက်ဆိုင်သည့်မေးခွန်းများ
(NH4)2S2O8 (ammonium persulfate) ၏ ဓာတုနှင့် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ လက္ခဏာများကား အဘယ်နည်း။ (NH4)2S2O8 (ammonium persulfate) ဓာတ်ပြုနိုင်သော ဓာတုတုံ့ပြန်မှုကား အဘယ်နည်း။
H2O2 (ammonium persulfate) ၏ ဓာတုနှင့် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ လက္ခဏာများကား အဘယ်နည်း။ ထုတ်ကုန်အဖြစ် H2O2 (ဟိုက်ဒရိုဂျင်ပါအောက်ဆိုဒ်) ပါသော ဓာတုတုံ့ပြန်မှုကား အဘယ်နည်း။
ထုတ်ကုန် NH4HSO4 (ဆာလ်ဖျူရစ်အက်ဆစ် ဟိုက်ဒရိုဂျင် အမိုနီယမ်ဆား၊ Ammonium sulfate) နှင့် ပတ်သက်သည့် မေးခွန်းများ
NH4HSO4 (ammonium persulfate) ၏ ဓာတုနှင့် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ လက္ခဏာများကား အဘယ်နည်း။ NH4HSO4 (ဆာလ်ဖျူရစ်အက်ဆစ် ဟိုက်ဒရိုဂျင်အမ်မိုနီယမ်ဆား၊ Ammonium sulfate) ပါရှိသော ဓာတုတုံ့ပြန်မှုများကား အဘယ်နည်း။
ညီမျှခြင်းရလဒ် # 5
O2 + 2H → H2O2
အောက်စီဂျင် ဟိုက်ဒရိုဂျင် ဟိုက်ဒရိုဂျင်ပါအောက်ဆိုဒ်
121 Hệsố
ညီမျှခြင်း O အကြောင်း နောက်ထပ် အချက်အလက်2 + 2H → H2O2
O2 (အောက်ဆီဂျင်) သည် H (Hydrogen) နှင့် ဓာတ်ပြုသည့် တုံ့ပြန်မှုအခြေအနေဟူသည် အဘယ်နည်း။
အခြားအခြေအနေ ဟိုက်ဒရိုဂျင်သည်အရည်ပျော်နေသော HCl နှင့် Zn တုံ့ပြန်မှုမှရရှိသည်
H2O2 (ဟိုက်ဒရိုဂျင်ပါအောက်ဆိုဒ်) ကို ဘယ်လိုတုံ့ပြန်မှုတွေ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သလဲ။
O2 (အောက်ဆီဂျင်) သည် H (Hydrogen) နှင့် ဓာတ်ပြုပြီးနောက် ဖြစ်စဉ်၊
ဤကိစ္စတွင်, သင်ရုံထုတ်ကုန်ပစ္စည်းဥစ္စာရှိမရှိကြည့်ရှုရန်စောင့်ကြည့်ဖို့လိုအပ်ပါတယ် H2O2 (ဟိုက်ဒရိုဂျင်ပါအောက်ဆိုဒ်), တုံ့ပြန်မှုရဲ့အဆုံးမှာပေါ်ထွန်း။
သို့မဟုတ်အောက်ပါဓာတ်ပြုပစ္စည်းတွေမဆိုလျှင် H (ဟိုက်ဒရိုဂျင်), ပျောက်ကွယ်သွားသည်
ဓာတုတုံ့ပြန်မှု O2 + 2H → H2O2
ဓာတ်ပြုနိုင်သော O2 (အောက်ဆီဂျင်) နှင့် ပတ်သက်သော မေးခွန်းများ
O2 (အောက်ဆီဂျင်) ၏ ဓာတုနှင့် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ လက္ခဏာများကား အဘယ်နည်း။ O2 (အောက်ဆီဂျင်) ဓာတ်ပြုခြင်းအဖြစ် ဓာတုတုံ့ပြန်မှုများသည် အဘယ်နည်း။
H (Hydrogen) ဓာတ်ပြုခြင်းဆိုင်ရာမေးခွန်းများ
H (Hydrogen) ၏ ဓာတုနှင့် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ လက္ခဏာများကား အဘယ်နည်း။ H (Hydrogen) ဓာတ်ပြုခြင်းအဖြစ် ဓာတုဓာတ်ပြုခြင်းများသည် အဘယ်နည်း။
H2O2 (ဟိုက်ဒရိုဂျင်) ၏ ဓာတုနှင့် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ လက္ခဏာများကား အဘယ်နည်း။ ထုတ်ကုန်အဖြစ် H2O2 (ဟိုက်ဒရိုဂျင်ပါအောက်ဆိုဒ်) ပါသော ဓာတုတုံ့ပြန်မှုကား အဘယ်နည်း။
ကနေညီမျှခြင်းပြသခြင်း 1 သို့5စာမျက်နှာ 1